Izesekeli Factory - China Izesekeli Abakhiqizi, abahlinzeki
Nezimo wokucwebezelisa Pad
Amaphayiphu okupholisha e-Flexible aziwa ngokuthi yiDiamond Polishing Pads asetshenziselwa ukupholisha noma ukubhoboza i-granite, imabula, itshe lemvelo kanye nokhonkolo ophilisiwe. Ama-Diamond Polishing Pads eza ne-Velcro esekelwa futhi atholakala kuhla olugcwele lwamanani we-grit kusuka ku-50 kuye ku-3,000 #; amaphayiphu wokugcina wokupholisa ama-buff atholakala ngombala omnyama nomhlophe. Ama-Diamond Polishing Pads enzele amaphethini ngokukhethekile ukukhuphuka kokuguquguquka, ukugeleza kwamanzi, kanye nempilo yephedi
Iroli yensimbi yensimbi ne-disc isetshenziswa kakhulu emahhotela, enxanxatheleni yezitolo, ezakhiweni ezisezingeni eliphakeme ezinjengetshe noma iterrazzo floor yokuhlanza nokunakekela. Ingasetshenziswa ngemithi emshini wokupholisha. I-disc # engu-0 # isetshenziswa kakhulu ezintweni eziguquguqukayo zamatshe nakwitshe lamafu; 1 #, 2 # isetshenziswe kakhulu ezintweni ezilukhuni ezifana ne-granite.
Ama-pads ahlukahlukene anemibala asetshenziswa ngokuhlukile, futhi hhayi wonke amaphedi kufanele asetshenziselwe lonke uhlobo lwesitezi. Manje ake ngikunikeze ngokuningiliziwe ukuze uthole amaphedi afanele kakhulu.